Chromium neFirefox ikozvino inogona kuiswa seinobvaruka paUbuntu | Linux Vakapindwa muropa
Canonical yakazivisa izvozvo iyo yakakurumbira Chromium uye Firefox webhu mabhurawuza izvozvi zvave kuwanikwa zvekumisikidza kuburikidza snaps paUbuntu uye mamwe masisitimu anoenderana.
El kwese kwese kushanda kurongedza system (inozivikanwa seSNAP yechidimbu chayo muChirungu) iri kuramba ichizivikanwa, uye zvirongwa zvekambani iri kumashure kweUbuntu ndeyekuita iyo yekumisikidza yekumisikidza sisitimu uye kunyangwe kuwedzera kubva pakutanga mukuburitswa mune ramangwana.
Chimwe chezvakanakisa maficha nezveSnap application ndeyekuti ivo vakachengeteka nekugadzirwa, vachishandisa mudziyo kuendesa software pane akasiyana Linux kugovera iyo inotsigira Canonical's Snaps binary fomati.
Snaps zvakare yakanaka kuti ugare uine up-to-date maapplication, kunyangwe izvozvi basa reCanonical kuita kugonesa vazhinji vanogadzira kuti vatore mafomu avo paSpap yeUbuntu nekumwe kugovera.
Chromium neFirefox yatovepo seSnaps yeUbuntu, pano isu tinokuudza maitiro ekuiisa
Iwo maapplication azvino anoendeswa kuSnap ndiwo maviri mabhurawuza ewebhu Chromium neMozilla Firefox ayo anogona kuiswa zvino kuUbuntu nekumwe kugoverwa kunoenderana kweSnaps.
Mabhurawuza ese ari maviri anokwanisa kuiswa kuburikidza neSnaps mukubatana kweLinux kugoverwa, pakati pedu patinogona kutaura Arch Linux, Solus, Linux Mint, OpenSuse, Debian, uye Gentoo. Saka, kana iwe uchida kuisa Chromium uye / kana Firefox, iwe uchafanirwa chete kushandisa tambo imwe yekodhi:
snap gadza chromium
snap gadza firefox
Kana maapps akaiswa seSnap haufanire kunetseka nezvekuvandudza, ivo vanogara vakagadziriswa kune yavo yazvino vhezheni nekukurumidza apo vanogadzira vanoita kuti riwanikwe. Ehezve, kana iwe uine Ubuntu hazviite zvine musoro kuisa Firefox seSnap nekuti ndiyo default browser uye inogara ichigadzirisa otomatiki kana paine vhezheni itsva.
Chromium yakavhurika-sosi browser chirongwa icho chine chinangwa chekuvaka nzira yakachengeteka, inokurumidza, uye yakagadzikana yevashandisi vese kuona iyo webhu? ️?
snap gadza chromiumhttps://t.co/QuTNRYRslF pic.twitter.com/OMQTxlGwXq
- Ubuntu (@ubuntu) 14 March we2018
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Chromium neFirefox ikozvino inogona kuiswa seinobaya paUbuntu
Uye nei uchichengeta iyo system?